Crow Archives - Kavyalaya - काव्यालय
by रितेश असार १४, २०७६
काँ……. काँ……. काँ………
कालो कुरुप कागको कर्कश कराई!
सपना टुट्छ। निन्द्रा छुट्छ। म ब्युँझिन्छु।
आँखा मिच्दै बरण्डामा एक नजर फ्याँक्छु। कालो काग बेसुरले गित गाईरहेको छ।
ओछ्यानबाट आफुलाई छुटाउछु र बरण्डामा निस्किन्छु। कागलाई धपाउछु। काग उडेर घर अघिको रुखमा बस्छ। म पुन ओछ्यानमै टासिँन जान्छु। काग पनि पुन बरण्डामै टासिँन आउँछ र पुन चिच्याउन थाल्छ, काँ…… काँ……… काँ……..!
उच्च डेसिबल भएको कागको कराईले मेरो कानको पर्दा फुट्ला झैँ हुन्छ। बाथरुम पस्छु। फ्रेस हुन्छ। ब्रेकफास्ट बनाउछु, खान्छु। काग एकोहोरो कराको कराई छ।
प्लेटमा ब्रेडलाई टुक्राटुक्रा पारेर बरण्डामा राखिदिन्छु। काग प्लेटको छेउमा आउँछ। ब्रेडको टुक्रा हेर्छ तर खाँदैन। फेरि कराउन थाल्छ। आखिर किन बिहानैबाट कराउँदै छ यो काग? के चाहिएको छ यसलाई?
यसरी काग करायो भने पाहुना आउँछन् रे! के आज पाहुना आउँदै छन् त मेरो घरमा?
काग र कागको कर्कश कराईलाई वेवास्ता गर्दै पढ्दै गरेको थ्रीलर किताब “द वमेन इन द विन्डो” पल्टाउछु। केही पन्ना पढ्छु। कागको एकोहोरो कराईले ध्यान किताबमा जाँदैन ।
मोबाइल बज्छ। साथीले कफि पिउने निम्तो दिन्छ। किताबलाई ओछ्यानमै छोडेर म तयार हुन थाल्छु। ऎना सन्मुख आफुलाई उभ्याउछु। आफुलाई देखेर हाँस्छु। गाला चाउरी पर्न थालेछ। बुढो भैएछु। साँच्चै, सम्झना भन्दा पनि तेज रफ्तारमा कुद्दो रहेछ, समय। मोबाइल निकाल्छु। नोट प्याडमा लेख्छु-
” समयको काम बित्ने हो बितिरहन्छ,
जरुरी छैन हरेक पटक मलामी जान ! “
घरबाट कफि अड्डातिर पाइला सोझाउछु। अचम्म! त्यो कालो काग मेरो पछि-पछि कराउँदै आउँछ। म धपाउछु। काग कराउँदै मलाई पछ्याईरहन्छ। कागलाई वेवास्ता गर्दै आफ्नै सुरमा हिंड्छु। काग बेसुरमा कराउँदै मलाई पछ्याईरहन्छ।
कफि अड्डा पुग्छु। साथीहरूको जमात हुन्छ। केही समय खर्च गर्छु। कतिले गफ छाट्छन्। कतिले दिमाग चाट्छन्। म हिसाबकिताब राख्दिन। भन्न खोजेको म गणितमा कम्जोर भनेको होइन नि फेरि! एउटा र्यान्डम विचार आउँछ।
मोबाइल निकाल्छु। नोट प्याडमा लेख्छु-
” मेरो प्रतिस्पर्धा म आफैँ सँग छ,
तर, दुनियाँ मलाई हराउन चहान्छ ! “
साथीहरूबाट बिदा मागेर घर तर्फ लाग्छु । त्यहीँ कालो काग पुन देखा पर्छ । फेरि कराउँदै मलाई पछ्याउन थाल्छ, काँ……. काँ………काँ……….!
कतै सुनेको थिए, कागले संदेश लिएर आउँछ रे अशुभ समाचारको। कतै यो कागले………? शरीर चिसो भएर आउँछ। घरमा फोन घुमाउछु। सबै सदस्यहरु कुशलमङ्गलनै रहेको खबर पाउँछु। शरीर पुन तातिन थाल्छ।
कालो कागलाई अशुभ मानिन्छ हाम्रो समाजमा। कालो कागले मृत्यु, अशुभ, अमङ्गल जनाउँछ रे। यस्ता अन्धबिस्वास ब्याप्त छन् हाम्रो समाजमा! मैले कतै पढेको थिए हामी मान्छेहरु मात्रै होइनौं चराहरु पनि अन्धबिस्वासी हुन्छन् रे। भर्खरै जन्मिएका बचेराहरुलाई यदि हामी मान्छेले छोयो भने माउले आफ्ना बचेराहरुलाई छाडेर जान्छन् रे। हामी मान्छेले छोएको अशुभ/अमङ्गल हुन्छ रे!
घर पुग्छु। त्यहीँ कालो काग बरण्डामा बसेर फेरि कराउन थाल्छ। रिस उठेर आउँछ। यो कागले मेरो पिछा किन गर्दैछ? किन यसरी कराईरहेको छ विहानैबाट? बरण्डामा गएर धपाउछु। एकैछिनमा फेरि आएर कराउन थाल्छ, काँ…. ..काँ…….!
हल्का लन्च लिन्छु। फेसबुक नियाल्छु। पुर्वप्रेमिकाको तस्बिर देख्छु। लभ रियाक्ट गर्छु। नोट प्याडमा लेख्छु-
” उनी आउँछु नभनी आईन् र जान्छु नभनी गईन्,
सायद मलाई बर्बाद पार्ने उद्देश्य थियो उनको ! “
कानमा हेडफोन कोच्छु र पल्टिन्छु। मस्त निदाँउछु। ब्युँझिदा दिन बूढो भै’सकेको हुन्छ। बरण्डामा एक नजर फ्याँक्छु। कालो काग देख्दिन। केही राहत महसुस हुन्छ।
त्यहीँ कालो काग मेरो मस्तिष्कमा पुन कराउन थाल्छ। जनावर, चराहरुको मान्छेको भन्दा खत्रा सुँघ्ने, सुन्ने, देख्ने क्षमता हुन्छन्। केही प्रलय हुनु भन्दा पहिले’नै यिनिहरुलाई त्यसको आभास हुन्छ। त्यो कालो कागले मलाई संदेश होइन केही संकेत पो दिदै थियो कि? मलाई केही भन्न पो खोज्दै थियो कि?
नयाँ विहान। नयाँ दिन। बरण्डामा आज कालो काग छैन। त्यसको कर्कश कराई पनि सुनिएको छैन। शरीर हलुका महसुस भैरहेको छ। फ्रेस हुन्छु। ब्रेकफास्ट बनाउछु, खान्छु।
आज अफिस जानू छ। अलि हतार गर्छु।
दिन तातो छ। वायुमण्डल तातो छ। मेरो पाईलाले पनि अफिसको बाटो तताउन थाल्छ। पछाडीबाट टाउकोमा केहिले ठुङ्छ। म पछाडी फर्कन्छु। हिजो’कै कालो काग मलाई अर्को हमला गर्न खोज्दै रै’छ। हिजोको शान्त काग आज कसरी अशान्त भयो? हिजो कराउँदै पछ्याएको कागले मलाई आज ठुङ्दै लखेट्न थाल्छ। कागको आँखामा म प्रष्टसंग देख्न सक्छु, रिस झुन्डिएको। म त्यसलाई धपाउने असफल प्रयास गरिरहन्छु।
मलाई “अलफ्रेड हिचकक” को थ्रीलर मुभी “बर्ड्स्”को याद आउँछ। आखिर यो कालो कागलाई म बाट के चाहिएको छ? किन मलाई लखेटिरहेको छ? किन मलाई ठुङ्न खोज्दै छ?
म आफुलाई बचाउदै हतार-हतार अफिस पुग्छु। कालो काग बाटो’मै कतै ओझेल हुन्छ।
पहिले-पहिले मलाई पनि चरा हुन मन लाग्थ्यो। चरा जस्तै आकाशमा उड्न मन लाग्थ्यो। जब लाग्यो, आकाश पनि एउटा पिजँडा हो, त्यस्तो रहर जन्माउन छाडेको छु। आखिर रहर त रहरै होनि। चरालाई पनि त मान्छे भएर बाँच्ने रहर लाग्दो हो। मोबाईल निकाल्छु। नोट प्याडमा लेख्छु-
“कहिलेकाहीँ रहरलाई पनि त रहर लाग्दो हो,
आफ्नै रुप ऎनालाई पनि हेर्ने रहर लाग्दो हो !”
अफिसमा एउटा साथिले निम्तो दिन्छ, “बेलुकी सानो पार्टी छ घरमा आउँनुस् है!”
“के को उपलक्ष्यमा?” म सोध्छु।
उ मुस्कुराउदै भन्छ, “नयाँ गाडी किनेको छु!”
म झुठ बोल्छु, “हुन्छ, म पक्का आउनेछु!”
मोबाईल निकाल्छु। नोट प्याडमा लेख्छु-
” साथीहरू गाडीको धाक देखाउँछन्,
धन्न बेलैमा जुत्ता किनेको रहेछु मैले! “
अफिसबाट निस्किन्छु। यताउती हेर्छु। कतै त्यो कालो काग मलाई कुरेर बसेको त छैन?
त्यो कालो कागसंग केही रहस्य त पक्कै लुकेको हुनुपर्छ। नत्र, किन पछ्याउँनु, किन लखेट्नु, किन ठुङ्नु?
यस्तै-यस्तै प्रश्नहरुलाई जोख्दै पुग्छु घर।
काँ….. काँ…. काँ….. काँ…….काँ……काँ……
म तर्सिन्छु । फेरि कागको कराई? एउटा काग मात्रै होइन कागको पुरै हुल करारहेको/चिच्याईरहेको सुन्छु। म आफ्नो नजर वरिपरी घुमाउछु। कागको झुन्ड मलाई हमला गर्न कतैबाट आईरहेको पो छ कि! कहिँ केही देख्दिन। काग होइन कतै मेरै कान त बजिरहेको छैन?
कागको कराई/चिच्याईलाई पछ्याउन थाल्छु। घर पछाडी पुग्छु। देख्छु, कागको झुन्ड एकोहोरो कराईरहेको। म अचम्म मान्छु। के भैरहेको छ यहाँ? किन यसरी कराउँदैछन् कागहरु?
अलि नजिक गएर हेर्छु। देख्छु, एउटा मृत काग काँडेतारमा अल्झिएको! अरु कागहरु छेउछेउमा बसेर शोक मनाईरहेका/रुईरहेका/कराईरहेका/ चिच्याईरहेका! देख्छु, एउटा काग मात्रै चुप बसिरहेको। पक्कै मलाई पछ्याउँने, लखेट्ने, ठुङ्ने त्यहीँ काग हुनुपर्छ।
म फर्कन्छु त्यो दृश्यलाई ओझेल बनाएर। मन भारी हुन्छ। गलामा केही अड्केको’झैं हुन्छ। म पग्लिन थाल्छु।
त्यो कालो कागले मेरो घरमा कुनै पाहुनालाई बोलाएन। कुनै अशुभ संदेश पनि दिएन। कुनै भयानक प्रलयको जानकारी पनि गराएन। केहीको संकेत पनि दिएन। केही अमङ्गल पनि भएन। बस्, त्यो कालो काग मलाई गुहार माग्दै थियो उ जस्तै अर्कोको जिवन बचाउन!
” को कराएको थियो कागको गुँड छेउमा बसेर,
जसले लिएर आयो मृत्युलाई पाहुना बनाएर ? “
Image Source:- etsy.com, Painter: TheOnlyLarissa
असार १४, २०७६0comment